Ogaden News Agency (ONA) – Wariyaasha Ree Sweden oo lagu xukumay 11 sano Iyo midowga Europe oo isu diyarinaya innuu joojiyo mucawamada uu siiyo KT Zenawi
Wariyaasha Ree Sweden oo lagu xukumay 11 sano Iyo midowga Europe oo isu diyarinaya innuu joojiyo mucawamada uu siiyo KT Zenawi
Wariyaashii u dhashay wadanka Sweden Martin Schibbye iyo Johan Persson ayaa maxkamad ku sheegi caddalad darada ku dhisneyd waxay ku xukuntay 11 sanno oo xadhig ah, Maxkamada ayaa markii hore rabtay inay ku xukunto 18 sanno balse waxa laga soo xigtay inay dhaheen 11 sanno ayaa kufilan in lagu cabsi galiyo wariyaasha kale ee caalamka ee jecel in dhibatada Ogadeniya ay kasoo waramaan.
Loyarka labada wariye ayaa laga soo xigtay innuusan wali go’aan qadan wajiga labadaad ee ay ku talaabsanayaan. Waxa uu sheegay in lagu riixayo in wariyaashu ay qirtaan inay danbilayaal yihiin markaasna ay cafis weydiistaan. Arrinkaan ayaa ah mid ku adag dad aan danbi galin inay danbi qirtan. Maamulka KT Zenawi ayaa hadda ka hor maxaabiis uu ku xukumay khayimin wadan oo ay kamid aheyd Burtukan gabadha la yiraahdo oo xisbiga mucaradka EThiopia heysatay ku qasbay inay qirato danbi aysan galin si loo siidaayo midaas oo ay markii danbe isku qirtay inay danbiile khayimin wadan ah aheyd si loo sii daayo.
Xukunkan labada wariye ayaa ah mid wadamada Europe iyo dowlada Sweden fadeexad ku ah, maadama oo uu ka dhan yahay xoriyyada saxaafada. Hadaba haddii lagu guul dareysto in lasii daayo labada wariya sida ugu dhaqso badan waxaa uu noqon kara in wadamada EU ay ka jaraan gargaarka ay siiyaan kaligii taliye Zenawi.
Hoos waxa ka dawata filim ka hadlaya Arrimhan;
Waa lagu xukumi 11 sano iyo ka badan becouse dowladdooda ayaa gacan ka gaysata in saas loola dhaqmo. woyanahu waxay ogyihiin wax-walba ooy smaeeyaan inaan lala hadlaynin oo ay green light ama Khad cagaaran ka haystaan Reer Galbeed including Sweden.
inaga waxaa inala jira isku tashi iyo dagaal dhaba oo aan lookala hadhin haddii rabo in Guul laga Gaadho Woyaankan Xunka ah (mALES)!
Ogaden freedom is near
itoobiya way ogtahay in labadan wariye ayna danbi lahayn, waxay kula dhacday ciilka ka haya xorriyada Ogaadeenya, oo ay xaqiiqsatay hadda inay lama horistaageen noqotay.
laakiin waxaan layaabay mid VOA da galabta u waramayay oo layidhaahdo Cabdicasiis xuseen ciilka isna ka haya in shacabka Ogaadeenya xorriyadiisa helo, markuu Ogaadeenya ku sheegay inay midowga afrika argagixiso u aqoonsanyihiin, xageebuu kakeenay , haddaysa xabashidiiba horistaagi la’dahay xorriyadanada isaga iyo kuwuu sheegayaa wax ha utareen.